Wararkii u dambeeyay xaalada Beledweyne iyo rabshado ka dhacay – AfmoNews
Wararkii u dambeeyay xaalada Beledweyne iyo rabshado ka dhacay
Xaalada magaalada Beledweyne ayaa degan, kaddib bannaan baxyo rabshado watay iyo is hor imaad saaka ka dhacay magaalada.
Maleeshiyo uu hoggaaminayo Jen. Xuud iyo ciidamada booliska ayaa iska hor imaad uu ku dhex maray xaafado ka tirsan magaalada Beledweyne, iyadoo wixii ka dambeeyay iska hor imaadkaas uu magaalada ka bilowday banaanbax rabshado watay oo dadweyne careysan ay dhagxaan ku gooyeen waddooyinka.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in safar lagu waday in maanta oo jimco ah ku tago magaalada Beledweyne Madaxweynaha Hirshabelle Cali Guudlaawe uu baaqday, sababo la xiriira xaalada kacsan ee ka jirta Beledweyne.
Waxaa magaalada ku sugan Wasiirka Arrimaha Gudaha, Madaxweyne kuxigeenka Hirshabelle, Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabelle iyo Xildhibaano.
Previous articleIskahorimaad hubeysan oo saaka ka dhacay magaalada Beledweyne